Manambara Ny Fitokonany Tsy Hisakafo Ao Amin’ny Fonja Foibe ao Hama Ireo Gadra Syriana Noho Ny Fahatongavan-Tsainy · Global Voices teny Malagasy
Aiza ny Firenena Mikambana ? Ny fahatsiarovantenan'izao tontolo izao, aiza ?
Nandika (fr) i Gaétane Lefèvre
Voadika ny 22 Avrily 2019 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, Français, English
“Miantehitra amin'ny maha-olombelona anareo izahay hamarananay ny fanaintainanay ary hanamaivana ny fijalianay” – Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube an'ny SY Plus. Loharano.
Alatsinainy 12 Novambra 2018, nandefa hafatra ho an'ireo Syriana rehetra sy ho an'izao tontolo izao avy ao amin'ny fonja foibe ao Hama ireo gadra noho ny fahatongavan-tsainy, tamin'ny alalan'ny fandefasana lahatsary fohy.
Faritan'ny Amnesty International ho toy ny tena “Famonoana Olombelona” ny ao Saidnaya, toerana fandefasan'ny fitondrana Syriana ireo voafonja mba ho vonoina ho faty. Nanombana ny Amnisty fa tamin'ny volana Martsa 2011 ka hatramin'ny Desambra 2015 dia olona efa ho 13 000 no namoy ny ainy tao – noho ny fitazonana azy ireo na vokatry ny famonoana tsy ara-dalàna.
Ny ankamaroan'ireo gadra 260 noho ny fahatongavan-tsainy tao Hama dia ny fitondrana Syriana no nampiditra am-ponja azy tany am-piandohan'ny revolisiona, ny taona 2011 sy 2012. Tao anatin'ny fijoroana vavolombelona amin-kitsimpo nalefan-dry zareo tamin'ilay rakipeo, milaza ny tenany ho mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana tsy nanao ratsy izy ireo, afa-tsy ny nihira ireo “hira ho an'ny fahafahana”.
Nandritra ny andro voalohany tamin'ny fikomiana, niezaka naka ny fifehezana ny fonja ny governemanta tamin'ny alalan'ny fanafihana an'habakabaka notanterahan'ny sampam-pitsikilovan'ny tafika an'habakabaka siriàna, malaza amin'ny herisetra fanaony.
Vokatr'io fifanarahana io, nanangana komity nivory tao anatin'ilay fonja ny fitondrana Syriana mba hanamaivanana ny sazin'ireo gadra miisa 400. Hatramin'izay fotoana izay, efa nisy ireo voafonja sasany no navotsotra. Saingy tamin'ny Aprily lasa teo, naato ary notapahana ity dingana ity avy eo, taorian'ny famoahana olona 40.
Mbola misy ampahany kely amin'ireo Siriana migadra noho ny fahatongavan-tsainy no mbola voatazona noho ny antony maro samihafa any amin'ny fonja sivily toa an'i Hama. Na izany aza, ny ankamaroany dia nalefa any amin'ny fonjan'ny miaramila na koa toby fitazonana miafina ampiasain'ireo sampana fiarovana maro. Ny tambajotra Siriana mpiaro ny zon'olombelona dia nanombatombana fa olona maherin'ny 95 000 no tratry ny fanjavonana an-terisetra, ka teo an-tanan'ny fitondrana Syriana ny 85% tamin'ireny.
Tsy eto no tena loza, ny tena loza dia ny gadra any ambanin'ny tany, izay tsy afaka manavaka ny atoandro sy ny alina, izay miaritra fahafatesana an'arivony isanandro, tsy mitsahatra ampijaliana sy ratraina isanandro. Tsy fantatro izay tokony holazaina aminao, na ny sarin'i Cesar aza dia ampahany kely amin'ny zavatra tena misy. Ho an'ireo gadra ireo, faniriany ny ho faty, satria mety maivana lavitra noho ny fijalian'izy ireo ny fahafatesana.
Nandritra ny taona maro, tsy noraharahian'ny fiarahamonina iraisampirenena ireo Siriana voafonja noho ny fahatongavan-tsaina ireo. Manoloana ny fahamaikan'ny toedraharaha izao , manontany ity gadra ity :